Ebuli PDF - Online, Nchekwa, Nzuzo Na Efu
Ebuli PDF faịlụ site na iwepu ejighi oru peeji page. Ngwa PDF anyị anaghị ebufe faịlụ gị na ịntanetị dịka ihe nchọgharị n'onwe ya na-arụ ọrụ na faịlụ gị. A na-echekwa nzuzo na nchekwa gị nke ọma.
Site n'iji ngwa a, ị kwenyere na Usoro ọrụ na Amụma nzuzo anyị.
Okwu mmalite nke ngwa ịntanetị Ngwaọrụ PDF
Ngwaọrụ PDF bụ mkpokọta ngwa PDF na-enye gị ohere ịrụ ọrụ na-adịkarị na nke bara uru na faịlụ PDF. Ngwá ọrụ anyị pụrụ iche: ha adịghị mkpa ịnyefe faịlụ gị na ihe nkesa iji hazie ha, ọrụ ndị a na-arụ na faịlụ gị na-eme na mpaghara site na ihe nchọgharị n'onwe ya.
Ngwa PDF ndị ọzọ dị n'ịntanetị na-eziga faịlụ gị na sava iji hazie ha wee budata faịlụ ndị arụpụta na kọmputa gị. Nke a pụtara na n'iji ya tụnyere ngwaọrụ PDF ndị ọzọ, ngwa anyị na-adị ngwa ngwa, dị oke ọnụ ahịa na mbufe data, yana enweghị aha (echekwara nzuzo gị kpamkpam ebe ọ bụ na anaghị ebufe faịlụ gị na ịntanetị).